Umsebenzi ka Peter Magubane.
Umsebenzi ka Peter Magubane
Indlu yokuhlala kaDkt Peter Magubane igcwele izimbiza ezikhanyayo nezidwebo zokhuni. Ekhoneni i-gramophone yama-antique ihlezi ngokuziqhenya eduze nesithombe esimnyama nesimhlophe sayo esishaya icilongo. Kusukela ngemuva kwejaji lezintambo, insizwa encane ehamba phambili e-Sophiatown ishaya i-pos.
Njengoba ehlala phambi kwefasitela, ukukhanya kukhanyisa izinhlamvu ezimhlophe zikaDkt Magubane. Isithombe esisishiywe nguyomuntu onomsebenzi wakhe wokuphila awunakwahlukana kusuka emgqeni wezingaphezu kwekhulu leminyaka yomlando waseNingizimu Afrika.
Kusukela kuDrayivu kuya ku-Photojournalist
Sophiatown, ngo-1955. Ngomhla kaMgqibelo. Ama-swanky gents kanye nama-classy ama-dames aphuma edolobheni, agqoke ama-nines. Izithende eziphakeme zibheke emigwaqweni ethuli. Ijazz yokukhohlisa idonsela ku-shebeen esiseduze. Ngaphakathi kwe-saxophones ezithinta izinyawo kanye nezingxabano zenhlalo zigcwalise umoya.
Ekhoneni owesifazane oneminyaka engu-23 ubudala, uPeter ukhuluma ngezigameko zezindaba zakhe nabangani bakhe beDrum, uThemba 'ungumnikazi weNgisi' noBob Gosani 'abathwebuli bezithombe ezinhle'. Ngaphansi kweminyaka engaphansi konyaka uPeter usebenze indlela yakhe yokuphakamisa umagazini kusukela kumshayeli kuya ku-photojournalist. Lezi ezintathu zingenye zezinkanyezi eziningi uSophiatown aphakamisile.
Nakuba abanye bakhethe isiteji sezombusazwe sokubhekana nokungabi nabulungisa kwezenhlalo, uPeter ukhethe ikhamera. Uveza ukuthi, 'Ngangifuna ukuloba impilo yabantu abamnyama baseNingizimu Afrika ngaleso sikhathi. Yilokho okwangikhuthaza ekufakeni izithombe. ' UPetru emuva ngo-1955 akawazi ukuthi yiziphi iminyaka ezizobe zimlindele. Sophiatown, usuku lwamanje. Njengoba uPetru ehamba ngeSophiatown eya eSoweto, ukhumbula ingane yakhe esetshenziswa emigwaqweni yayo.
Izindlu zakudala zedolobha lamaminerali, ezakhiwe emanxiweni aseSophiatown emgodleni omhlophe we-Triomf ('Triumph'), zimelele enhlabathini elayishwe ngokomlando. Kunzima ukucabanga ngezinsuku ezivelele zakwaSophiatown ezazala izishoshovu nabadwebi abafana noPeter. Lezo zitaladi zinezinkumbulo zakhe ezincane: ikhamera yokuqala uyise ayinike yona, uthando lomama wakhe nesiyalo sakhe, ikhaya lakhe eligcwele umndeni wakhe ligcwele, ligwazwe ngelinye ilanga ngenkathi lidlala.